Tanàna mahagaga ny tanànan'i Dubai! | Miaraka amin'ny fitiavana avy any UAE!
navoakan'ny Dubai City Company at Jona 11, 2019
Dubai Mahavariana ny tanàna Place!
Dubai City Company miandrandra hatrany sy manavao ireo mpikambana vaovao voasoratra ato amintsika amin'ny vaovao avy any The Middle East. Noho izany, mandefa sarimihetsika, sary ary fampahalalana momba izany izahay Dubai City. Izahay dia Dubai Lovers ary ny tanjonay dia ny hampiroborobo ny United Arab Emirates.
Ny ekipanay dia te-hampiroborobo hatrany ny Emirates. Manome fanampiana foana ny mpitsidika hianatra momba ny Emira Arabo Mitambatra Fomba fiaina, expats mpitarika 👳 sy ny Dubai City Company ⭐⭐⭐⭐⭐ ekipa mpitoraka bilaogy mitady ny hanome an-tserasera ny fotoana tsara indrindra sy ny fampahafantarana ireo mpamaky iraisam-pirenena.
Na iray amin'ireo kintana Bollywood malaza indrindra aza Shahrukh Khan Mila ny mpanaraka anay amin'ny alàlan'ny Dubai fomba fiainana. Ary amin'ny maha izy azy dia manasa ny hafa ho any Dubai. Ankoatra izany, Indiana tia azy fotsiny ao amin'ny pejin'ny media sosialy.
Afaka nitsidika an'i Mumbai ny governemanta ary nahatonga ity olona mahavariana ity hanome ny toerana tiany indrindra ary mizara ny fomba fiainan'i Dubai.
Eny, mety ianao be ny vahiny ao amin'ny UAE? Tokony hijery an'i Dubai ianao fihetseham-po miaraka amin'ny Bollywood Superstar. Ary ho an'ny fampahalalanao, ny fampielezan-kevitra sy ny tranonkalan'ny governemanta dia tantanana amin'ny Dubai Corporation ny Marketing Tourism. Manantena anao ny horonantsary !.
Ny mahagaga anay dia any amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ny saikinosy Arabo. Ary ny ampahany betsaka aminy dia ao amin'ny zoro atsimo-andrefana amin'ny Ranomasina Arabo. Tena fanta-daza i Dubai City ho an'ny Indiana ary Pakistane ny olona. Ary koa ny mpizahatany iraisam-pirenena rehetra Eoropa ary Etazonia Dubai manana fitiavana mafana sy mafana lova ara-kolontsaina ho an'ireo mpitsidika vaovao manerana izao tontolo izao. Ankoatra izany, ireo mponina eo an-toerana izay mipetraka ao amin'ny 7th Emirates dia mandray tsara ireo mpitsidika vaovao rehetra. Satria malala-tanana tokoa izy ireo manoloana ny fomba fahazoany mpitsidika vaovao any Dubai City.
Ao an-tanànan'i Dubai, manana masoandro mandritra ny tontolo andro 356 izahay. Amin'ny lafiny iray, manintona safotra izay ahafahanao manana ny fotoana tsara indrindra aminao. Mazava ho azy, Dubai manana làlana mahafinaritra miaraka amin'ny hotely mahatsiravina sy ny toeram-pivarotana lehibe indrindra miaraka amin'ny mahasarika 21 taonjato taonjato. Misy ihany koa ny tsara indrindra raharaham-barotra vondron'olona eto amin'izao tontolo izao. Ny renivohitry ny Emirà Arabo Mitambatra mandray fampiasam-bola sy tetikasa vaovao an-tapitrisany maro isan-taona. Ary ao an-tsaina izany, ny fialamboly sy ny mpitsidika mpandraharaha nifindra tany Emirates isan-taona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Nahoana i Dubai no anisan'ny tanàna tsara indrindra eran-tany?
Tokony hotsarovana fa ny vola eo an-toerana dia dirham, fa tsy dollar dolara. Saingy tsara izany satria raha mampitaha ny AED 3.87 amin'ny dollar US 1 isika. Toa toy ny hevitra saro-pantarina ny ho tonga ary mandany fotoana miaraka amin'ny firenena mandefitra toy ny vahoaka Dubai.
Ny Emirà Arabo Mitambatra sy ny firenena cosmopolitan ary ny mpitsidika dia mihoatra noho ny fandraisana azy ireo hitsidika ity toerana ity ary hijery ny fomba mahatalanjona an'i Emirates amin'ny teknolojia. Na izany aza, ny finoana silamo dia fomba fiainana iainana any Dubai. Amin'ny lafiny ratsy, ireo mpizahatany izay tsy mbola tany Emiràny dia tokony handray fepetra ara-kolontsaina sy ara-pinoana ho an'ny faharetan'ny fialantsiny.
Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, dia mahita fahasamihafana maro isika raha oharina amin'i Eoropa. Ohatra, Dubai Rulers Fitantanana ity toerana ity hatramin'ny nametrahana an'i 1833 sy Al Maktoum fianakavian'ny mpanjaka hatramin'izao. Ny Emirates dia miorina hatrany. Ary ny Mpanjakan'i Dubai dia olona hendry ary mitarika fomba amam-pandrosoana hampiroborobo ny mpitarika tsara indrindra ao Dubai. Ary nanomboka tamin'izay dia lasa toeram-pandraharahana ara-barotra sy fizahan-tany i Dubai ho an'ny faritra Golfa. The Dubai Tantara Tsy mora izany, teo am-piandohana, ny mpikambana 800 avy amin'ny foko Bani Yas, tarihin'ny fianakaviana Maktoum, dia nanorim-ponenana teo am-bavan'ny biriky tao 1833. Noho izany, sarotra ho an'ny firenena arabo ny fanombohana. Ny seranam-piaramanidina dia rivotra voajanahary ary tsy ela i Dubai dia ivon-toerana ho an'ny fanjonoana, paingotra ary ny varotra ranomasina.
Araka ny hitanay rehetra tao amin'ny fahitalavitra dia nisaorana ho an'ny Emiratsika nandritra ny folo taona vitsivitsy tany amin'ny faritr'i Golfa. Ny vaovaom-baovao sy ny mponina ao an-toerana dia nahita fitomboana tsy mampino teo amin'ny sehatry ny ekonomia Dubay. Miasa mafy ny governemantan'i 7th Emirat, ary miasa tsy tapaka hanatsara ny fiainan'ny olom-pireneny. Ny Emira Arabo Mitambatra dia fivarotana ara-barotra ho an'ny fananganana avo kokoa sy hampiditra fitsipika manan-danja izay manampy ireo firenena an-dalam-pandrosoana. Ary ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy mahazatra dia mandeha lavitra.
Rehefa miara-miasa amin'ny orinasa izahay ary hanokatra ny kaontinao. Ho afaka hifandray amin'ny olona hafa avy any Emirates sy Qatar ianao, Arabia Saodita ary na dia India. Noho izany, azafady azafady mba hanomboka hiditra an-tsoratra amin'ny orinasa. Ary avy eo dia mampifandray amin'ny tambajotra hafa ao amin'ny UAE.